ကျွတ် နဲ့ခြ ဘယ်လိုနှိမ်နှင်းရပါ့… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » How To.. » ကျွတ် နဲ့ခြ ဘယ်လိုနှိမ်နှင်းရပါ့…
Posted by ကထူးဆန်း on Aug 22, 2012 in How To.. | 22 comments
ကျွတ် နှင့် ခြ နှိမ်နှင်းရေး
မနေ့ က ၁၀ မိုင် က ခြံတစ်ခြံမှာ နေတဲ့ အဖိုးကြီး အဖွားကြီး ထံရောက်ခဲ့ပါတယ် ။ အဖွားကြီး က မဒမ်ထူးဆန်းကို ကျေးဇူး တင်ကြောင်းပြောပေးပါဆိုလို့ အံသြခဲ့ရပါတယ် ။ မဒမ်ထူးဆန်း ပေးတဲ့ နည်းနဲ့ ကျွတ်တွေကို နှိမ်နှင်းလိုက်တာ အောင်မြင်သွားကြောင်း ၊ အရင်တုန်းက ခြံထဲ ခြေချရမှာ ကြောက်လောက်အောင် ကျွတ်များကြောင်း ၊ အခုတော့ ကျွတ်တွေ မရှိတော့လို့ မဒမ်ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပေးပါတဲ့ ။ ကျွန်တော်လည်း အံသြစွာနဲ့ ပြန်ခဲ့ရပါသည် ။
အိမ်ပြန်ရောက်တော့ မဒမ်ထူးဆန်းကို မင်း ပေးထားတဲ့ နည်းလမ်းတွေ နဲ့ အလုပ်ဖြစ်နေတယ် ပြောတယ် ။ ဟုတ်ကော ဟုတ်ရဲ့လားလို့ မယုံသင်္ကာစွာ နဲ့ ပြောမိပါသည် ။ သူကတော့ ယုံချင်ယုံ မယုံချင်နေ သူတို့ ငယ်ငယ်က သူ့ အဖွား လုပ်တဲ့ နည်း အတိုင်း လုပ်တာ ။ သူတို့ အိမ်မှာလည်း ကျွတ်တွေ မရှိတော့ တဲ့ အပြင် ဘယ်သူ့ ခြံကို သူ ဘယ်တုန်းကပြောလိုက်လိုံ ဘယ်လို လိုက်လုပ်တဲ့ ခြံတွေမှာ လည်း ကျွတ်အန္တရယ်၊ ဘယ်လို ကင်းဝေးသွားတယ် ဆိုတော့ ကထူးဆန်း စောဒက တက်စရာတော့ မရှိဘူးပေါ့ ။ ဒါနဲ့ ထုံးစံ အတိုင်း ရွာထဲ သတင်းဖြန့်ချင်တာနဲ့ ရေးလိုက်တာပါ ။
ယုံတာ မယုံတာ လုပ်တာ မလုပ်တာတော့ up to you ပါ နော် ..
နည်းလမ်းက နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့မှာ ခြံ ပါတ်ပါတ်လည် ဆား ပက်ပေးပါတဲ့ ။ ပြီး ဘုန်းကြီး ပရိတ်ရွတ်ထားတဲ့ ပရိတ်ရည် နဲ့ ဖြန်းပေးပါတဲ့ ….
ဆား ဘယ်လောက် ပရိတ်ရည်ဘယ်လောက် လဲ အထွန့်တက်မေးတော့ ကြည့်ပြီး သင့်တော်မယ်ထင်သလောက်သာ လုပ် ဘာမှ အချိုး အစားတွေ မရှိဘူးတဲ့ ။
ကဲ .. ကိုယ့် ခြံထဲ ကျွတ်တွေ ပေါများ လို့ စိတ်ညစ် နေရင် နှစ်ဆန်း တစ်ရက်နေ့ စောင့် လို့ စမ်းကြည့်ပေါ့ ..
ကထူးဆန်းကတော့ တွေးလို့မရဘူး ။ ကျွတ်ဆိုတဲ့ သတ္တ၀ါက မိုးမှ ထွက်တာ .. နှစ်ဆန်း တစ်ရက် နွေခေါင်ခေါင် ဘယ်ချောင်ရောက်နေမှန်း မသိတဲ့ ကောင်တွေကို အဲ့ဒီ အချိန်မှာ လုပ်တာ လျော့နည်း ပပျောက်စေတယ် ဆိုတော့ …
မဒမ်ထူးဆန်းကိုလည်း စောဒက မတက်ရဲ .. ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ပြောလိုက်တဲ့ အဖိုးကြီး အဖွားကြီးက လည်း မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ ဆိုတော့ ခေါင်းကုတ်ရုံ ရွာကိုတိုင်တည်ရုံ အပြင် မပိုပါဘူး.. :grin:
အဲ့ဒီ အဖိုးကြီး အဖွားကြီးကဘဲ နောက်ထပ် ခြ နှိမ်နှင်းရေး အတွက် ချွေတာရေးနည်းလမ်းကောင်းပေးလိုက်သေးတယ် ။
ဆပ်ပြာရည်ထဲမှာ ဆနွင်း နဲနဲ ဖျော်ပြီးလောင်း ။ ခြတွေ အတုန်းအရုံး သေဆိုဘဲ ။ မြေပဒေသာ က ဆေးဝယ်စရာ မလို ။
ဆပ်ပြာရည်ကိုလည်း သီးသန့် ဖျော်စရာ မလို ။ အ၀တ်လျှော်ပြီးထွက်လာတဲ့ ဆပ်ပြာရည်ကို သာ ပြန်ခံသုံးတဲ့ ။ သူ့ခြံထဲက ခြတောင်ပို့တွေလည်း ရေကြည်ရာ မြက်နုရာ ပြေးကုန်ပြီတဲ့ ။
ဆိုတော့ up to you နော် .. :grin:
နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့ဆိုတာက သကြန်အပြီး မြန်မာနှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့ လို့ နားလည်မိပါတယ်။
တီကောင် မလာအောင်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းများရှိရင်လဲ မ စ ကြပါခင်ဗျ…။
ကျုပ်က တီကောင်ကို ကြောက်တော့မကြောက်၊ ဒါပေမယ့် နဲနဲ ရွံသလိုပဲ..
တီကောင်တွေ အိမ်နားရောက်လာရင် စိတ်ညစ်တယ်။
ဟုတ်တယ် ဦးဦးပါရေ .. အဖွားကြီး ပြောပြလိုက်တာတော့ မြန်မာ နှစ်ဆန်းတစ်ရက် နေ့ ။ လမ်းထဲ ပရိတ်လာရွတ်တဲ့ ဘုန်းဘုန်းထံမှ ပရိတ်ရေ နဲ့ ဖြန်းတယ်ပြောပါတယ် ။
ကျွတ်ဆိုတဲ့ ကောင်တွေက အငန်ဓာတ်နဲ့မတည့်ဘူးဆိုရမလားဘဲ
ကျုပ်တို့ငယ်ငယ်တုန်း ကျွတ်တွေမျှော့တွေ နွားမှာ ကိုက်လာလို့ရှိရင်
ဖြုတ်ပြီး ဆားနဲ့ ဖုံးလိုက်ရင် ဗိုက်ပေါက်သွားတယ်ခေါ်မလား
ဝါတွင်းကြီး ကုသိုလ်တွေတော့ အတုံးလိုက်အတစ်လိုက်ဘဲ
ကျုပ်အထင် လဆန်းရက်တို့ ပရိတ်ရေ တို့နဲ့ကျတော့ မဆိုင်သလားဘဲ
ခြံပတ်ပတ်လည် ဆားရည်လောင်းလိုက်ရင် သဘောတစ်ခုသက်ရောက်မယ်ထင်ပါ့
တစ်လောကဘဲ အလုပ်ဆိုဒ်ထဲ ခြတွေတက်လို့ဆေးဖျန်းရတာ ခြတော့ဘယ်လိုနေတယ်မသိ
လူတော့ အတော်ခံလိုက်ရတယ် လက်ငင်းအကျိုးပေးပုံ
ဒါနဲ့ ဘေးနားအိမ်က ဘော်ဘော်တစ်ယောက်က
ခြတက်တာများဘာခက်တာမှတ်လို့ ခြထွက်လာတဲ့ အပေါက်တွေကို အင်္ဂျင်ဝိုင်လောင်းထဲ့လိုက်လို့ပြောမှ
ဒါနဲ့ ခြတွေထွက်လာတဲ့ အုတ်နံရံအပေါက်တွေကို အင်္ဂျဝိုင်ရယ် ဒီဇယ်ရယ်ကိုရောပြီး
ခြတွေ ကြွက်တွေ ဖျက်စီးလို့ ကမ္ဘာပေါ်မှာတစ်နှစ်တစ်နှစ်ဆွုးရှုံးမှု့ကိုကိန်းဂဏန်းတွေနဲ့
ရန်သူမျိုးငါးပါးထဲက တစ်ပါးပါးများဖြစ်နေသလား ဘာတဲ့
အတော်ပဲဗျာ …. တမံတလင်းကနေ ရေငွေ့ရိုက်ရာကနေ .. ခြ လာလာကိုက် လို့ ကတ်ပုံး တွေ နေရာရွှေ့ ရွှေ့ရတဲ့ ဒုက္ခ လဲ မသေးဘူး … နနွင်းနံ့ တော့ နဲနဲ ကြောက်တယ် …
မြန်မာနိုင်ငံမှာနေတဲ့ မြန်မာတစ်ယောက်အနေနဲ့ စမ်းကြည့်မယ်ဗျို့
ဆားကိုရေဖျော်ဖြန်းဖြန်း.. တိုက်ရိုက်ပက်ပက်.. ကျွတ်တွေ..ဥတွေ..သေပါတယ်.
ကျွတ်..မျှော့ ခရု..ပတ်ကျိ.. တီကောင်တွေခန္ဓာက.. ဆားနဲ့မတည့်လို့ပါ..။
ဂေဟသမားတွေကတော့.. ကျွတ်မျှော့တွေ.. ဆားရည်နဲ့.လုပ်ရင်..မျိုးပြုတ်သမို့..မလုပ်ဈေင်ဘူးတဲ့လေ..
“ခြ”ကတော့.. လူအိမ်တွေဖျက်သမို့.. သတ်သာသတ်..
its all because of osmosis by hypertonic condition outside leeche’s cells swell and burst.
Read more: Why Salt Kills Leeches | eHow.com http://www.ehow.com/info_10042678_salt-kills-leeches.html#ixzz24JbY62hE
Read more: Homemade Termite Killer | eHow.com http://www.ehow.com/info_8604029_homemade-termite-killer.html#ixzz24JaKL1uc
သူကြီးပေးတဲ့ borax ၊ သကြား ၊ ပြောင်းဖူး နည်းကတော့ ၊
ခြ မသေခင် အိမ်က ခွေးတွေ အရင်သေမယ့်နည်းကြီး ။
ဦးထူးဆန်း ပြောတဲ့ နည်းထဲမှာ
ခြံရဲ့ ပတ်ပတ်လည်ကို ဆားနဲ့ ပရိတ်ရေနဲ့ ဖြန်းတာလို့ပဲ ပါတာပါ …
သဂျီးပြောတဲ့အတိုင်းဆို ဆားနဲ့ရေကို ဖျော်ပြီး ခြံတစ်ကွက်လုံး ဖြန်းရမယ့် ပုံစံပဲ …
ဦးထူးဆန်းကြီး ပြောတဲ့ ..
ခြသတ်နည်းကိုတော့ လက်တွေ့ စမ်းကြည့်ရဦးမယ်ဗျ ..
ဝါပ ကာလကျမှပေါ့ ..
သဂျီးပြောတဲ့ ခြသတ်နည်းကတော့ဖြင့် ..
အီးလို သိပ်မဖတ်တတ်လို့ ဘာတွေ ရေးထားမှန်း မသိပါဂျောင်း ..
မြန်မာလိုလေး ရေးပေးရင် သိပ်ကောင်းမည် ဖြစ်ပါဂျောင်း …
ဘုရားတရား နဲ့ ဝေးတဲ့ ကထူးဆန်း .. ၀ါတွင်း တောင် သတိမရ .. တယ်မိုက်တာကိုး.. :grin:
ဘာတဲ့  သတ်သာသတ် ဆိုပဲ
ခြ ဆိုတဲ့ ကောင်တွေကိုအတော်မုန်းနေပုံရတယ် ဟဲဟဲ
အမှန်တော့ကျုပ်လည်းအတော်မုန်းတာ
ရန်ကုန်မှာအိမ်ဝယ်ရင် ခြ မရှိတဲ့ နေရာရွေးဝယ်ရတာ
တိုက်ခန်းနဲ့နေသူများ ပုရွက်ဆိတ် အလွန်ပေါ မီးခလုတ်တွေထဲဝင် ပိုးဟပ်ပေါအိမ်မြှောင်ပေါ မဖြစ်ကြဘူးလားဟင်..
ကြည်ဆောင်းတို့ တိုက်ခန်းနဲ့နေတာ ပုရွက်ဆိတ် ပိုးဟပ် အိမ်မြှောင်အလွန်ပေါလို့ ဘယ်လိုများနှိမ်နင်းရမယ်မသိ
၀ါတွင်းကြီးတော့ မလုပ်ရဲပါဘူး ၀ါထွက်မှပါ
မကြည်ဆောင်းရေ ပုရွက်ဆိတ်နဲ့ ပိုးဟပ်ကတော့ Insect Killer Spray ကြိုက်ရာ ဘရန်းသုံး အကုန်ပျောက်ပါတယ်။ ဂျမ်ဘိုဆိုပိုကောင်း မှတ်တယ်။
လွတ်ရာမှာသွားနေကြဘို့ အတွက်စိတ်ကဆုတောင်း။မနေတာကတော့လက်တွေ့ ဘဲ။
ကျေးဇူးပဲ ကိုထူဆန်း ။
အဘတို့ ရန်ကုန် ခြံထဲက ၊
servant quarter သဘောမျိုး သစ်သား အိမ်လေးဟာ ။
လူလည်း မနေပဲနှင့် ၊ ခြ က ကြမ်းကိုစား ၊ ကြမ်း လဲ ရေနံသုတ် ။
ဘေး နံရံကိုစား ၊ နံရံ လဲ ရေနံသုတ် နှင့်
အိမ် တစ်လုံးစာ မကဘူး ပိုက်ဆံ ကုန်နေခဲ့တာ ။
” ဆပ်ပြာရည်ထဲမှာ ဆနွင်း နဲနဲ ဖျော်ပြီးလောင်း ။ ခြတွေ အတုန်းအရုံး သေဆိုဘဲ ”
အိမ် ကို စမ်းခိုင်းလိုက်ဦးမယ် ။
အိမ်မှာက ခြရော၊ ကျွတ်ရောရှိတော့ နှိမ်နင်းရမယ်။
ဒီပို့စ်ကို ဖတ်အပြီး Google.com မှာ “ကျွတ်” ဆိုတာကို ရိုက်ထည့် ရှာကြည့်လိုက်တာ ထိပ်ဆုံးမှာ ဒီပို့စ်ကြီးက ပေါ်နေပါပေါ့လား။
နည်းလမ်းတွေ အတွက်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ ပိုက်ဆံ သိပ်ကုန်ကျစရာ မလိုဘဲ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ ဖြစ်လေတော့ သိပ်ကောင်းတာပေါ့။
သာမန် ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်အတိုင်း တွေးကြည့်လျှင်တော့လေ … ယုံနိုင်စရာမရှိဘူးပေါ့လေ ။ ဒါပေမယ့်လည်း … ကြံရမရဖြစ်သူတွေအတွက်တော့ စမ်းကြည့်ဖို့ကောင်းတဲ့နည်းပါပဲ …. ။
တွားသွား အရေခွံပါးတဲ့ သတ္တ၀ါမို့ ဆားကြောက်တာ လက်ခံလို့ ရပေမယ့် နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့ဆိုတာက နွေခေါင်ခေါင်ကြီးမှာ … ပက်ထားတဲ့ ဆားကလည်း .. မိုးတွင်းထိမခံနိုင်ဘူး ဆိုတော့ .. စဉ်းစားစရာပါပဲ … ။ နောက်တစ်ချက်ကလေ .. ကျွတ်တွေက .. သွေးစုပ်တဲ့ သတ္တ၀ါမို့ …. မကောင်းဆိုးဝါး စာရင်းဝင်သွားလားမသိဘူး … ပရိတ်ရည်နဲ့ဖြန်းဖို့ဆိုတာပါ ………။
ကျွတ်ဆိုတဲ့ သတ္တ၀ါက ဗိုက်ပေါက်လို့ သေတာတောင် … ခေါင်းထောင်ပြီး … လိုက်ကပ်ဖို့ ကြိုးစားနေတာ .. ။ အန္တရာယ်ကတော့ တွယ်ပြီး မလွှတ်တော့ဘူး … ။
အခုမှဘဲ ကျွတ် နှိမ်နင်း နည်းနောက်တစ်ခု သိရတော့တယ်..
အရင်ကတော့ထုံးနဲ့ ခြံ ပတ်လည် လိုက်ပက်ပေမဲ့တစ်ပတ်ဘဲခံတယ်..
အိမ်က သားငယ်လေးပါးစပ်ထဲဝင်မှာစိုးလို့ အမြဲတမ်းစိတ်ပူနေခဲ့ရတာ..
ပရိတ်ရည်ရဲ့အစွမ်းကိုယုံကြည်သောကြောင့် အောင်မြင်စွာနှိမ်နင်းနိုင်မည်ထင်ပါသည်..
ကျွန်မ တို့လယ်ထဲမှာ လည်း အများကြီး ပဲ မိုရာသီဆို ပိုများတယ်..။
ဆားနဲတော့ တစ်ခါမှ မစမ်းကြည့်ရသေဘူး..။ ပြာကိုတော့ လည်းတော်တော် တော့ ကြောက်တယ်…။
အဲဒီ ကျွတ်တွေကလည်း မြေသြဇာကောင်းတဲ့ မြေမှာ မ ဖြစ်တာများတယ်လို့ ကြားဖူးတယ်..။
သိသလောက်.. မြေရေကောင်းရှာသူတွေက.. ကျွတ်မျှော့တွေအရင်ရှာကြည့်ကြတာပါ..
ရေထဲ..မြေထဲမှာ.. အဆိပ်အတောက်ဓါတ်သတ္တုပါရင်.. နေလို့မရဘူး..
အဲဒါကြောင့် ဆရာဝန်တယောက်ရေးတဲ့.. စာထဲ.. မြန်မာပြည်ရဲ့.. ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေမှာ ပိုးသတ်ဆေးပါတတ်လွန်းလို့.. ပိုးထိုးလောက်ကိုက်အသီး..အရွက်တွေရှာရွေးဝယ်စားတယ်လို့.. ဖတ်ဖူးတယ်..
ညီငယ် ဆရာဝန်တစ်ယောက်ရေးတဲ့ စာလေးကိုသွားသတိရမိတယ်ဗျို့…
ခြတွေကို ပွက်ပွက်ဆူတဲ့ေ၇နွေးနဲ့ လောင်းပီးနှိမ်နင်းပါသတဲ့..
သူ့စာလေးကို ဒီလို အဆုံးသတ်ထားသဗျ…
ဘ၀ခရီးမှာ ခြနဲ့တူတဲ့ လူတွေကိုတွေ့မိတိုင်း ပွက်ပွက်ဆူနေတဲ့ ရေနွေးအိုးကိုပြေးမြင်မိတော့တာပါပဲ….